ဦးသန့် ဧ။် အတ္ထုပတ္တိအကျဉ်း :: စာပေချစ်သူ
Homepage>ဦးသန့် ဧ။် အတ္ထုပတ္တိအကျဉ်း
ဦးသန့် ဧ။် အတ္ထုပတ္တိအကျဉ်း
ဦးသန့် ရဲ့အမှတ်တရ ဖြစ်ရသော `မိန့် ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်များ´
Every human being, of whatever origin, of whatever station, deserves respect. We must each respect others even as we respect ourselves."
(လူတိုင်းဟာ ဘယ်အနွယ်ဘယ်အဖွားကပဲ ဆင်းသက်လာပါစေ... လေးစားသမှုနဲ့တော့ ထိုက်တန်ကြတာချည်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားသမှုထားသလိုမျိုး လူတိုင်းအပေါ် တူညီစွာဆက်ဆံကြရမယ်။)
"Wars begin in the minds of men, and in those minds, love and compassion would have built the defenses of peace."
(စစ်ပွဲတွေဟာ လူသားတွေရဲ့စိတ်သန္တန်ထဲမှာ အစပြုတာပါ။ အဲ့ဒီစိတ်တွေထဲမှာပဲ လူသားတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကိုယ်ချင်းစာနာမှုတရားတွေကသာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာပါ။)
ဦးသန့်ရဲ့အကြောင်းကို စပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝလေးကို တစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်နော်။ ဦးသန့်ကို ဖခင်ဦးဖိုးနှစ်နဲ့ မိခင်ဒေါ်နန်းသောင်တို့က ၁၉၀၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ရက်နေ့မှာ ဧရာဝတီတိုင်း ပန်းတနော်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ပန်းတနော်ဇာတိဖြစ်တဲ့အတွက် နောင်အခါမှာ ဦးသန့်ကို “ပန်းတနော်ဦးသန့်” လို့ ခေါ်တွင်ကြပါတယ်။ ဦးသန့်ရဲ့မိဘတွေဟာ အောင်မြင်တဲ့ မြေပိုင်ရှင်နဲ့ ဆန်ကုန်သည်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဖခင်ဦးဖိုးနှစ်က မွတ်စလင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသွေးနှောတဲ့မျိုးရိုးက ဆင်းသက်လာတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ ရန်ကုန်မြို့မှာ သူရိယသတင်းစာကို ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းကို တည်ထောင်ရာမှာလည်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖခင်ကွယ်လွန်စဉ်တုန်းက ဦးသန့်ဟာ အသက်၁၄နှစ်သား သာရှိပါသေးတယ်။ အမွေဆက်ခံမှု အရှုပ်အရှင်းတွေကြောင့် မိခင်ဒေါ်နန်းသောင်နဲ့ ကလေး၎ယောက်ဟာ စီးပွားရေး အကြပ်အတည်း ပေါင်းများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ဦးသန့်ဟာ ငယ်စဉ်က ပန်းတနော်အထက်တန်းကျောင်းမှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ သမိုင်းဘာသာရပ်ကို ဆက်ပြီးသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ပြီးသွားတော့ ပန်းတနော်အမျိုးသားကျောင်းမှာ ကျောင်းဆရာ လုပ်ဖို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၅နှစ်မှာ အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့ ကျောင်းအုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အနီးအနားမှာရှိတဲ့ မအူပင်မြို့မှာ နေထိုင်ပြီး ပညာအုပ်ဖြစ်တဲ့ (နောင်တစ်ချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမယ့်) ဦးနုနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။
ဦးသန့်ဟာ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ ၂ ဘာသာနဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့ “ဂန္တလောက” မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲမှာ ၄ ကြိမ်တိုင်တိုင် ပထမဆုရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန့်ရဲ့ ပထမဆုံးစာမူဟာ အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားထားတဲ့ စာမူဖြစ်ပြီး အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြပုံပြင်များ၊ နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီး ကျောင်းသုံးစာအုပ်၊ ဗမာသစ်နှင့် ပညာသစ်၊ ပြည်တော်သာခရီး (၃ အုပ်တွဲ) စတဲ့ စာအုပ်တွေကို ရေးသားခဲ့သလို နိုင်ငံရေးဝေဖန်ချက်၊ စာပေ ဝေဖန်ချက်တွေ အပါအဝင် ပညာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေကို သီလဝ၊ မောင်သန့်၊ ဦးသန့် ဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်တွေနဲ့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ စာပေဝေဖန်ရေး နိုင်ငံရေးဝေဖန်ချက်တွေကို ရေးသားတဲ့အခါ သူ့ရဲ့အယူအဆတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးသားခဲ့သလို သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကလည်း ခေတ်မီတာကို တွေ့ရပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးရခါစ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးနုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဦးသန့်ကိုရန်ကုန်ကိုခေါ်ပြီး ၁၉၄၈ခုနှစ်မှာ အသံလွှင့်ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာနအတွင်းဝန် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၅၇ ခုနှစ်အထိ ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဦးနုအတွက် မိန့်ခွန်းတွေရေးသားပေးတာ၊ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေ စီစဉ်ပေးတာ၊ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တော်တွေကို လက်ခံတွေ့ဆုံပေးတာ စသဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရင်းနဲ့ ဦးနုရဲ့ အယုံကြည်ရဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ conference အများအပြားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၅ ခုနှစ်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘန်ဒေါင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ “ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားမှု” ကို မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ ပထမအကြိမ် အာရှ-အာဖရိက နိုင်ငံများဆိုင်ရာ ညီလာခံမှာ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ အမြဲတမ်း ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်လုပ်တတ်ပြီး မှန်တယ်ထင်ရင် အလျှော့မပေးတတ်တဲ့ ဦးသန့်နဲ့ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ဦးနုတုိ့ မသင့်မမြတ်ဖြစ်လာတာကနေစပြီး ၁၉၅၇ခုနှစ်မှာ ဦးသန့်ကို ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီးတော့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ New York ကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၆၁ ခုနှစ်အထိ ဦးသန့်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သာမက တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ယာယီကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် တာဝန်ကိုပါ ပူးတွဲထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ မြန်မာအစိုးရက ဦးသန့်ကို “ပြည်ထောင်စုစည်သူသင်္ဂဟ ပြန်တမ်း” အရ “မဟာသရေစည်သူဘွဲ့” နဲ့ ဗိုလ်ရာထူးကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကဲ.. ကျွန်တော်ကပဲ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ထဲကို ဦးသန့် တဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာပုံကို အနည်းငယ်ဆက်ပြောသွားပါမယ်။
ဦးသန့်ဟာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရာထူးကို အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာ ပထမဦးဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သူပါ။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒက်ဂ် ဟမ်းမားရှိုးလ်ဒ် (Dag Hammarskjöld) ရဲ့ မကုန်ဆုံးသေးတဲ့သက်တမ်းကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ အထွေထွေညီလာခံမှာ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ထောက်ခံချက်နဲ့ ယာယီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ အထွေထွေညီလာခံကနေ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ၁၉၆၆ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ သက်တမ်းအထိ ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပထမသက်တမ်းအတွင်းမှာ ဦးသန့်ဟာ ကျူးဘားဒုံးပျံပြဿနာ (Cuban Missile Crisis) ကိုဖြေရှင်းရာမှာ ပါဝင်စေ့စပ်ပေးခဲ့ပြီး ကွန်ဂိုပြည်တွင်းစစ်ကို ပြီးဆုံးအောင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဦးသန့်ရဲ့ ဒုတိယရာထူး သက်တမ်းအကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါမည်။
ကျူးဘားဒုံးပျံပြဿနာအားဖြေရှင်းပြီးသည့်နောက် ဦးသန့် သတင်းမီဒီယာအား ပြောကြားစဉ်
၁၉၆၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့မှာ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ တညီတညွတ်တည်း ထောက်ခံမှုနဲ့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒုတိယသက်တမ်းအဖြစ် သူ အငြိမ်စားယူမယ့် ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါတယ်။ ဒီဒုတိယသက်တမ်းအတွင်းမှာ ဦးသန့်ဟာ အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကို အာရှနဲ့ အာဖရိက,က နိုင်ငံတော်တော်များများ ဝင်ရောက်နိုင်ရေးကိစ္စတွေ၊ တောင်အာဖရိက အသားအရောင်ခွဲခြားမှု ဆန့်ကျင်ရေးတွေ၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ယီမင်အရေးနဲ့ ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှာ ဘာရိန်းအရေး၊ ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ အာရပ်-အစ္စရေးခြောက်ရက်စစ်ပွဲ၊ ပရာ့ဂ်နွေဦးတော်လှန်ရေး (Prague Spring) နဲ့ ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားကို ဆိုဗီယက်ကျူးကျော်မှုအရေးအခင်း၊ ဗီယက်နမ်စစ်၊ ၁၉၇၁ ခုနှစ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေးရရှိစေမယ့် အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန်စစ်ပွဲ စတာတွေကို အေးငြိမ်းအောင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် အမေရိကန်-ဆိုဗီယက် စစ်အေးတိုက်ပွဲမှာတုန်းက သမ္မတနှစ်ဦးအကြား ဦးသန့်ဟာ “တတိယ ဘာသာစကားအသစ်” ကိုအသုံးချ၊ “တွေ့ဆုံအဖြေရှာရေး” ကိုအခြေခံပြီး စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ဆိုဗီယက်တို့က ဒုံးကျည်စခန်းတွေကို ရုပ်သိမ်းသွားပြီး အမေရိကန်တွေက ကျူးဘားကို ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီအရေးအခင်းတွေအားလုံးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိပါးစေနိုင်တဲ့အပြင် စစ်ဖြစ်ကြမယ့်အရေးတွေဖြစ်ပြီး ဦးသန့်ရဲ့လိမ္မာပါးနပ်စွာ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးမှုတွေကြောင့်သာ စစ်ကိုရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်က ၂ဝ ရာစုရဲ့ အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်း စုစည်းထုတ်ဝေထားတဲ့ Who's Who in the 20th Century စာအုပ်မှာ ဦးသန့်ရဲ့အကြောင်းပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတကာအရေးအခင်းတွေကို မတုန်မလှုပ်ဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းရဲ့ အစမှာ ဆိုထားပါတယ်။ တကယ်လည်း ဦးသန့်က သူ့လက်ထက်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းပေါင်းမြောက်များစွာကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဦးသန့်ဟာ UFO ယာဉ်ပျံတွေကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်တစားလေ့လာခဲ့သလို ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်လူမျိုး ရူပဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာ James E. McDonald ကို UFO နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂမှာ စကားပြောနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့မှာတော့ ဦးသန့်က သူဟာဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ တတိယသက်တမ်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ လုံခြုံရေးကောင်စီကလည်း ဦးသန့်နေရာမှာ ဆက်ခံမယ့်သူကို သီတင်းပတ်ပေါက်များစွာ အပူတပြင်းလိုက်ရှာရတော့တာပေါ့။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကွတ်ရ်ထ် ဝါးလ်ဒ်ဟိုင်းမ် (Kurt Waldheim) ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ဦးသန့်က သူ့နောက်ဆုံး တာဝန်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ၁၀ရက်အလိုမှာပဲ Kurt ကို တာဝန်ဝတ္တရားတွေအားလုံး လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးသန့်အငြိမ်းစားယူသွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး New York Times သတင်းစာရဲ့ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ အယ်ဒီတာ့အာဘော်မှာလည်း The Liberation of U Thant ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ တခမ်းတနား ဂုဏ်ပြုရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကာလအတွင်းမှာ ဦးသန့်ဟာ Palisade နဲ့ Douglas Avenues လမ်းကြား၊ ၂၃၂ လမ်းအနီးမှာရှိတဲ့ ၄.၇၅ ဧကလောက်ကျယ်တဲ့ Riverdale, Bronx ခြံမှာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၇၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှာတော့ ဦးသန့်ဟာ အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ New York မှာပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဦးသန့်ရဲ့ဆန္ဒအရ သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကို ရန်ကုန်ကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ ဦးသန့်ရုပ်အလောင်းကို မြေမချခင် အများပြည်သူ နောက်ဆုံးဂါရဝ ပြုနိုင်ဖုိ့အတွက် ရန်ကုန်မြို့ ကျိုက္ကဆံကွင်းမှာ ပြသထားပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာပဲ တသီးတသန့်မြှုပ်နှံဖို့ဆိုပြီး ကျောင်းသားနဲ့ပြည်သူတချို့က ဦးသန့်ရုပ်အလောင်းကို လုယူသွားပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂနေရာဟောင်းမှာ မြှုပ်နှံသဂြိုလ်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ကနေ ၁၁ ရက်နေ့အတွင်း ကျောင်းသားတွေကပဲ ယာယီဦးသန့်ဗိမ္မာန်ပြုလုပ်လိုက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီကစလို့ အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ မနက်လင်းအားကြီးချိန်မှာ အစိုးရက ကျောင်းဝင်းထဲဝင်ရောက်ပြီး ဦးသန့်ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည်ယူဆောင်သွားပြန်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဦးသန့်ကို ရွှေတိဂုံစေတီတော် ခြေရင်းမှာ မြှုပ်နှံပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက လူထုအုံကြွမှုကိုပဲ “ဦးသန့်အရေးအခင်း” လို့ ခေါ်တွင်ပါတယ်။
ဦးသန့်ရဲ့ မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင်... ဦးသန့်ဟာ ဒေါ်သိန်းတင်နဲ့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့သမီးတစ်ဦး၊ မြေး ၄ဦးနဲ့၊ မြစ် ၃ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ ဦးသန့်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော မြေးယောက်ျားဖြစ်တဲ့ ဦးသန်းမြင့်ဟာ သမိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဌာနမှာ ဝါရင့်ဝန်ထမ်းတစ်းဦးဖြစ်ပါတယ်။ The River of Lost Footsteps စာအုပ်ကိုလည်း ဦးသန်းမြင့်က ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါသေးတယ်။
အတွေ့အကြုံ၊ အမြင်နှင့် ဂုဏ်ပြုမှုများ
ဦးသန့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူပါဝင်ဖြေရှင်းခဲ့ရတဲ့ အရေးအခင်းတွေအကြောင်းကို ရေးသားထားတဲ့ "View From the UN" ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American Publishing House က ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဖြေရှင်းရတဲ့အခါ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကို တာဝန်အရ ချဉ်းကပ်တာမျိုးတွေအပြင် အပြန်အလှန် ခင်မင်မှုတွေနဲ့လည်း ချဉ်းကပ်ရတာတွေရှိပါတယ်။ ဒီကြားထဲက ထူးခြားတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိခဲ့ပုံတွေကိုလည်း စာအုပ်ထဲမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ဦးသန့်ကို နိုင်ငံတကာ ချစ်ကြည်ရေးနားလည်မှုရရှိရေး ကြိုးပမ်းချက်အတွက် နေရူးဆုပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဆုနဲ့အတူပါရှိတဲ့ အိန္ဒိယငွေ ရူပီး တစ်သိန်းကို ဦးသန့်က ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ကျောင်းရန်ပုံငွေကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ မာရှယ်တီးတိုးကပေးအပ်တဲ့ ယူဂိုဆလဗ်တံခွန်ဘွဲ့တံဆိပ်အပြင် နိုင်ငံတကာက ပေးအပ်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ပေါင်း ၁၇ ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုပေးအပ်ဖို့တောင် လျာထားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကပေးအပ်တဲ့ ဘွဲ့ထူးတွေကတော့ ဝဏ္ဏကျော်ထင်၊ သီရိပျံချီ၊ စည်သူဘွဲ့နဲ့ မဟာသရေစည်သူဘွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန့်ရဲ့အသက် ၁၀၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မွေးနေ့ပွဲမှာတော့ လက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကလည်း ဂုဏ်ပြုသ၀ဏ်လွှာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့သ၀ဏ်လွှာမှာ ဦးသန့်ဟာ ရှေ့က အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဒက်ဂ် ဟမ်းမားရှိုး ကွယ်လွန်ပြီးနောက် သူ့သက်တမ်းကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့ပြဿနာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ကို ကျေပွန်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ဦးသန့်ဟာ တစ်ခုတည်းသော ကမ္ဘာ့မိသားစုဖြစ်ရေးနဲ့ ကမ္ဘာ့မိသားစုကြီးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားသူ ဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ ဦးသန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုဖီအာနန်ကလည်း ဦးသန့်ဟာ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေးစတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားသူဖြစ်ကြောင်း ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းတခုမှာ ထ ည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဦးသန့်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ U Thant Peace Award ဆိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုတီထွင်ပြီး နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်လာခဲ့ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့တော်ရဲ့ သံရုံလမ်းကိုလည်း Jalan U Thant (ဦးသန့်လမ်း) ဆိုပြီးတော့ ဦးသန့်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ရဲ့ အရှေ့ဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင်မြစ်မှာရှိတဲ့ Belmont Island ဆိုတဲ့ကျွန်းငယ်လေးကိုလည်း U Thant Island ဆိုပြီး ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း တိုကျိုမြို့ရဲ့ United Nations University (UNU) ဌာနချုပ်မှာ “U Thant Honorary Lecture Series” ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ပုံမှန်သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် အဲ့ဒီဌာနချုပ်က Conference ခန်းမကြီးကိုလည်း ဦးသန့်အမည်နဲ့ပဲ မှည့်ခေါ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေအပြင် United Nations International School မှာ U Thant Scholar